Doorashadii Gudoomiyaha waxay jiho cusub u kaxaynaysa siyaasadda dalka - Caasimada Online
Home Maqaalo Doorashadii Gudoomiyaha waxay jiho cusub u kaxaynaysa siyaasadda dalka
Doorashadii Gudoomiyaha waxay jiho cusub u kaxaynaysa siyaasadda dalka
Laga soo bilaabo dowaldii Carta ee la soo dhisay sadnkii 2000 waxaa mar walba jiray khilaaf u dhaxeeya Baarlamaanka, Xukuumadda iyo Madaxweynaha, kuwaas sababi jiray in ay fadhiid noqdaan hay’adaha dowladda, waxaana laga dhaxli jiray khilaaf iyo kala qoqob soo kala dhex gala xildhibaanada iyo siyaasiyiinta markaa xilka haya, taas oo aakhirka sabab u noqon jirtay in Ra’iisul Wasaare la cayriyo, gudoomiye baarlamaan la isugu tago, madaxweyne culays siyaasadeed isku casilo.
Dhaqanka soo jireenka ah oo ragaadiyey habsami u socodka nidaamyadii curdanka ahaa ee dalka soo maray waxaa sabab u ahaa nidaamka 4.5, ka shaqaynta dano dalal shisheeye, mucaaradida cida talada haysa, ku takri fal awoodeed, kursi jeceyl, dano dhaqaale, is fahamwaa ku salaysan jihada siyaasada ee dalku ku socdo iyo dastuurka dalka oo qoloba dhanka danteedu ku jirto u fasirato. Dhamaan arimhaan oo is biirsaday waxay dib u dhac u keeneen nidaamka dowliga ah ee markaas jira,
Dowladi Sheikh Shariif ee la soo dhisay 2009 horaanteedii waxay sii waday dhaxalkii ay ka heshay dowladii Cabdullahi Yusuf waxaan mudo ka dib lugaha la gashay is qab qabsi siyaasadeed oo saameeyey xubno badan oo golaha Wasiirada ka tirsan, waxaana ku sii xigay inuu isna meesha ka baxo Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashid. Waxaan isna ku waarin xilkuu hayey Gudoomiyihii Baarlamanka ee xiligaas jiray Sheikh Adan Madoobe, waxaana kurisgiisa si fudud ugu soo booday Shariif Xassan oo ahaa xilgaas kooxdii geed fadhiga dowladii Sheikh Shariif. Khilafkii sii socday waxaa laga dhaxlay in Madaxweynaha hada xilka haya Farmaajo loo magacaabo Ra’iisul Wasaare, balse shaqo fiican oo lagu diirsaday markuu qabtay waxaa mudo yar gudaheed loo soo jeedshay inuu is casaliso shirkii Kampala ka dhacay ka dib.
Mudadii yarayd ee u dhimanayd Dowladii Sheikh Shariif Madaxweynaha ka ahaa waxaa dalka loo sameeyey khariirad lagu socdo (Road Map) waxaana fadhiid laga dhigay xildhibanadii u soo taagnaa Moshinka, taas oo sababtay in mudo yar gudaheed lagu qabto shaqo fiican oo u horseeday dalka in laga saaro nidaamkii KMG ahaa, loona sameeyo Dastuur qabyo ah. Shaki kuma jiro in Xukuumadii Cabdiwali Gaas ay ku bad-baaday Road Map, maxaa yeelay awoodii oo dhan waxaa lagala wareegay Baarlamaanka oo xiligaas ahaa 550 xildhibaan.
Dowladii ku xigtay ee Madaxweyne Xassan Sheikh kuma cibra qaadan siyaasadii soo wiiqday dowladihii ka horeeyey, balse mudo yar ka dib wuxuu cagta saaray mowjadihii moshinka, wuxuuna isku badalay sadex Ra’iisul Wasaare, waxaase dad badan oo siyaasada u dhuun daloolo aaminsanayeen in hadii Xasan Sheikh shaqadiisa faraha uga qaadi lahaa Ra’iisul Wasaare Saacid Shirdoon in wax badan dalka ka qabsoomi lahaa. Culaysyadii ka dhashay moshinada ayaa Xasan Sheikh wuxuu go’aansaday in mudada u dhimanayd in Barlamaanka la curyaamiyo lana sameeyo madal ay ku midaysan yihiin maamulada gobolada, waxaana fududaatay is jiid jiid badan ka dib in doorasho dib uga dhacday xiligeeda la qabto.
Madaxeyne Maxamed A. Farmaajo oo ka fa’iidaysanayaa khaladadkii siyasadeed ee dalka ka soo dhacay ayaa go’aansaday inuu keensadao Ra’iisul Wasaare ay wada shaqayn karaan islana dhamaystaan mudada xil haynta. Balse dhaqankii lagu yaqaanay xildhibaanada Baralamaanka ayaa bilowday oo ahaa moshin laga keeno Madaxweyne iyo mid loogu hanjabo Ra’iisul Wasaaraha. Waxaana soo if baxay khilaaf kala dhantaali kara howlaha qaran ee dowladda horyaala, si taas looga hortago ayaa waxaa la saaray culays siyaasadee gudoonkii baarlamaanka kadib markii moshin laga keenay, wuxuuna ku biyo shubtay inuu xilka iska casilo.
Gudoomiyaha Cusub ee Barlamaanka Maxamed Mursal ayaa waxaa lagu xaglinayaa inuu taageero fiican ka haystay xukuumadda, waxaana arinkaan dhabaha u xaaraysaa in maanta dalku yeeshay Xukuumada, Madaxweyne, Gudoon Baarlamaan iyo Hay’ado Garsoor oo wad shaqaynaya isku aragtina ka ah jihada siyaasadeed ee dalkaan loo kaxaynayo. Dadka qaar ayaa dhaliilsan in koox is fahamsan oo talada gacanta ku haysa ay halis badan ka imaan karto. Balse anigu waxaa qabaa fikir ka duwan oo ah in koox is fahamsan kaliya dalkaan u horseedi karto horumar, sababtoo ah ma nihin wadan qaan-gaar ka ah dhanka siyaasadda, marba hadii kuraastii dalka ugu sareeyeysay iyo kuwa ugu hooseeya lagu qaybinayo 4.5.
Marka aad fiiriso sida caalamku u shaqeeyo waxaa jira xisbiyo siyaasadeed oo marka doorasho la galo mid adkadaa ama la wada dhistaa dowlad wadaag ah, taas macnaheedu waxay tahay in la helo koox isku meel dalka u wada. Tusaale ahaan wadamada aan dariska nahay ee Ethiopia, Kenya, iyo Jabouti intaba waxaa talada haya hal xisibi, kaas oo aqlabiyad weyn kuleh baarlamaanka, wuxuuna u horseeday horumar dhaqaale iyo mid siyaasadeed.